Raspbian PIXEL, forogo yePC, ikozvino yakavakirwa paDebian Buster | Linux Vakapindwa muropa
Arne Exton mugadziri ane mukurumbira unouya muchikamu nekuti anoita chimwe chakakosha. Iye ndiye ane chekuita neanoshanda masystem senge RaspEX, imwe nzira yeiyo Raspberry iyo yazvino vhezheni yaive yakavakirwa paEoan Ermine payanga ichiri mubeta (kana kunyangwe pakutanga). Iyo zvakare inovandudza vhezheni ye Android yemakomputa uye Raspbian Pixel, iyo isiri chinhu kunze kweiyo Raspberry Pi inoshanda system, yakavakirwa paDebian, yePC neMac makomputa.
Iyo yazvino vhezheni yeRaspbian Pixel, kana zvakanyanya kunyanya Rasbperry Pi Debian 10 Pixel yemakomputa, yasvika nenhamba 191102, zvinoreva kuti ndiyo vhezheni yaNovember 2019, XNUMX. Ruzivo rwakakurumbira nderekuti kuendesa uku kunoitika zvichibva paDebian 10 Buster, iyo vhezheni yeProjekti Debian inoshanda sisitimu iyo yakavambwa muna Chikunguru yegore rino.
Raspbian Pixel 191102 Zvakakosha
Kubva paDebian 10 Buster.
Inowanikwa nemhando mbiri dzakasiyana dzeLinux 4.19 kernels dzePAE (4.19.0-6-686-pae) uye isiri-PAE (4.19.0-6-686) masystem.
Inosanganisira Firefox sewebhu browser.
NetworkManager uye Wicd zvakaverengerwa kugadzirisa network kubatana.
Akaisirwa nekusarudzika Refracta Snapshot mune yayo yazvino vhezheni (10.2.9) ichiperekedzwa neRefracta Installer 9.5.3.
Firefox yakaiswa kuitira kuti iwe uve nebrowser paunopinda mukati semudzi. Iwe haugone kumhanya Chromium semudzi. Chimwe chinhu chakanaka nezveFirefox ndechekuti unogona kuishandisa kuona mafirimu eNetflix.
Semafungiro angu, kutaura izvozvo, ndinoomerera kuti mumaonero angu zvichienderana nekuti ini ndinoshandisa iyo Raspberry inoshanda system pane yangu bhodhi, ndingati handifunge kuti Raspbian isarudzo huru, uye zvishoma kana tikatora uchifunga kuti iyi inobva kuExton ndeyekuiisa pamakomputa ayo anowiriranawo nekumwe kugovera. Chero zvazvingaitika, kuve nesarudzo nguva dzose kwakanaka uye isu tatova neayo vhezheni itsva yeichi forogo izvo zvingakufadza.
Iyi vhezheni yeRaspbian Pixel kana Raspberry Pi Debian 10 Pixel 191102 inowanikwa kubva Iyi link. Iwe unogona kuverenga iyo noti yeiyi kuburitswa kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspbian PIXEL, forogo yePC neMac, ikozvino yakavakirwa paDebian Buster
Mutemo weRussia weInternet unounza kusahadzika nemakakatanwa pakati pehunyanzvi nemasangano ekodzero dzevanhu